မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: လူ့ကပ်ပါး သံကောင်
Posted by Mr Htay Tint at 3:19 AM
Maribel Artaste July 11, 2012 at 2:56 PM
Mr Htay Tint July 20, 2012 at 7:42 AM
Thank, I just read it. Htay Tint ( 20 July 2012)
aungaung July 13, 2012 at 11:09 AM
ဇော်ဦးသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတော့ သူနဲ့ တကျောင်းထဲ နေခဲ့ဘူးသူ တစ်ယောက်က အောက်ပါစာတုိုလေး ပုို့ပေးလုိုက်တယ်။
ဇော်ဦး ဆိုတဲ့ကောင် က ငါတို.နဲ. တနှစ်ထဲ ဒဂုံ ၁ က။
ငယ်ငယ်ထဲက စိတ်ပုတ်တယ်၊ မိန်းမ ရှုပ်တယ်၊ စာကတော်တယ်၊ ကျူရှင်မှာ သူများတွေကို ကောင်းကောင်း စာမသင်ရအောင် စကားတအားများတယ်၊၊ ပြီးတော့ စာတော်တဲ့လူတွေကုို ခေါ်ပြီး အရက်သောက်တယ်။ သူများတွေ စာ မလိုက်နိုင်အောင် တမင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်တာ။ ပြီးမှ သူက ညမှာ ဖင်ထောင်ပြီး ဆရာမ ခေါ်ပြီး အသေစာကျက်တာ။
အဲဒီကောင်က ငယ်ငယ်ထဲက ဦးနှောက်တော့ကြီးတယ် ၊ ယုတ်မာတဲ့နေရာမှာ။